Odoyaal iyo madax NATO oo kulmay - BBC News Somali
Odoyaal iyo madax NATO oo kulmay
20 Juunyo 2010
Image caption Markabka ciidamada badda ee NATO ee ku sugan xeebta Laas Qoray
Odayaal iyo wax garad reer ka tirsan magaalada Laas qoray ah ayaa shalay markab ka mid ah kuwa ciidamada NATO ee la dagaalamaya burcad badeedda, kula shireen taliyayaasha ciidanka badda ee NATO.
Kulanka labada dhinac oo ka dhacay markabka dushiisa oo markaasi taagnaa marsada magaalada Laas Qoray ayaa waxay ka wada hadleen xaalufinta badda iyo kalluumeysiga sharci-darida ah iyo burcad badeedda.
Odayaasha la kulmay taliyayaasha ciidamada badda ee NATO, oo ahaa toban odoyaal iyo Isimo isugu jira ayaa waxaa ka mid ah Axmed Cabdi Janbeel oo u sheegay BBC in ay la kulmeen taliyaha ugu sareey ciidamadaasi oo la yiraahdo General Stoltz.
Waxa uu sheegay in taliyayaashu ay kala hadleen arrimaha burcad badeedda iyo argagaxisada, isla markaana ay ka codsadeen inay la shaqeeyaan, gacana ay ka siiyaan sidii ay u wargelin lahaayeen haddii burcad badeedda ay ku arkaan beriga.
Odoyaasha ayaa sheegay in burcad badeedda ka sokoow iyaguna inay dhibaato ku qabaan maraakiibta shisheeye oo ay sheegeen in ay badda ka kalluumeeystaan, iyadoo magaalada ay ku taallo warshad kalluunka lagu sameeyo, isla markaana noloshoodu au badda ku xiran tahay.